Chirwere cheCoronavirus Chanetsa kuChina Chotyirwa Kuti Chingangopinda muNyika
Ndira 27, 2020
Vashandi vezvehutano pamwe nemapurisa muChina vachibatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere che coronavirus.
Vamwe vagari vemunyika vanonzi vave kugara vakabatira ura mumaoko vachitya kuti chirwere chanetsa kuChina che coronavirus chingangopinda munyika sezvo paine kufambidzana kwakanyanya kwevanhu pakati penyika mbiri idzi.
Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu makumi mashanu nevatanhatu muChina, uye vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vabatwawo nacho.
Hurumende, kuburikidza nebazi rezvehutano, inonzi yakatotora matanho ekungwarira kuona kuti chirwere ichi hachipinzwe munyika, uye kuti kana chichinge chapinda munyika chochengetedzwe kuitira kuti chisapararira.
Bepanhau reHerald rakataura nemunyori mubazi rezvehutano, Doctor Agnes Mahomva, pamusoro pechirwere ichi uye matanho ari kutorwa nehurumende kuchidzivirira, ivo vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona kuona kuti chirwere ichi hachipindi munyika.
Bazi rezvehutano rinonziwo riri kutarisisa pamwe nekuchengetedza vanhu makumi maviri nevaviri vakabva kudunhu rewuhan kuChina, uko kunonzi kwakatangira chirwere ichi.
Chirwere che coronavirus chinonzi chave munyika dzinosanganisira Japan, Republic of Korea, Thailand, Malaysia neAmerica. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvehutano Doctor Obadiah Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nebazi ravo, asi vadaira nharembozha yavo vati VaMoyo vanga vasipo vakati tizoedza kuvabata neMuvhuro.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, uye chiri nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa, VaFrenk Guni, vanoti kudzivirirwa kwechirwere ichi kunoti netseyi nekuti panguva yapfuura chaizivikanwa chichitapuriranwa kubva mukudya nyama yemhua inenge iinacho.
VaGuni vanoti iye zvino zvave kunetsa nekuti hutachiwana hwe coronavirus iyi hwakasanduka zvekuti hwave kukwanisa kuparadzirwa kubva pane mumwe munhu huchienda pane mumwe.
Vanotiwo matanho anonzi ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe ekudzivirira kupararira kwacho akanaka sezvo kusati kwave nemishonga inokwanisa kuchirapa.
Minongedzo yemunhu anogona kunge abatwa nechirwere ichi inonzi inosanganisira kubatwa nedzihwa, kutemwa nemusoro, kupindwa nechando, kukosora, kurwadziwa nepahuro, kana kungonwa muviri kusaita zvakanaka.